Sicir Bararka Turkiga Ayaa Gaadhay 36% Isagoo Ku Soo Dhawaaday Heerkii Ugu Sareeyey Mudo 20 Sano – Radio Somit
Sicir-bararka sannadlaha ah ee Turkiga ayaa kor u kacay heerkii ugu sarreeyay tan iyo 2002, xogta rasmiga ah ayaa muujisay Isniintii, taas oo ay sababtay xiisadda lacagta ee la xidhiidha istaraatiijiyada dhaqaale ee aan caadiga ahayn ee Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Qiimaha macmiisha ayaa kor u kacay 36.1 boqolkiiba bishii hore isla muddadaas 2020, marka loo eego kororka sanadlaha ah ee 21.3 boqolkiiba bishii November, sida uu sheegay Xafiiska Tirakoobka Turkiga.
Tiradan ayaa ah tii ugu sareysay tan iyo bishii Oktoobar 2002, waana bishii ka hor inta uusan xukunka la wareegin xisbiga Islaamiga ah ee Erdogan kadib dhibaato kale oo dhaqaale oo Turki ah.
Guusha joogtada ah ee Erdogan ayaa inta badan loo aaneeyaa horumarka iyo barwaaqada ay dowladiisu ku talaabsatay labaatankii sano ee uu Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha ahaa ee Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Balse waxa uu wajahayaa waddo aad u adag oo uu ku doonayo in dib loogu soo doorto doorashada la qabanayo bartamaha sanadka 2023-ka.
Kulanka todobaadlaha ah ee dowladda ka dib, Erdogan ayaa ballan qaaday inuu qoysaska, shaqaalaha, ardayda iyo dadka hawlgabka ah ku taageeri doono xirmo gargaar oo ay ku jiraan taageero dhaqaale oo loogu talagalay biilasha gaaska iyo kordhinta mushaharka.
Madaxwaynuhu waxa uu sheegay in uu ka xun yahay in uu arko sicir bararkan sare u kacay balse waxa uu intaa ku daray “Waxa aanu go’aansanay in aanu sida ugu dhaqsaha badan hoos ugu dhigno sicir bararka ilaa hal lambar.
Ra’yi ururin la sameeyay ayaa muujinaya in wareegii labaad uu kaga adkaaday inta badan musharaxiintii ugu waaweynaa, waxaana isbaheysiga talada haya uu maamulka baarlamaanka u gacan gelinayaa koox xisbiyo mucaarad ah oo caan ah.
Lira way duntay
Laakiin Erdogan wuxuu ku adkeystay siyaasadiisa wuxuuna ka soo horjeeday kor u qaadista heerka dulsaarka – oo uu ugu yeeray “dhammaan hooyadayo iyo aabaheen” – si loola dagaallamo sicir-bararka.
Heerarka sare ee ribada waxay carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa iyo kobaca dhaqaalaha oo gaabis ah, laakiin waxay faa’iido u leeyihiin xakamaynta sicir-bararka maadaama ay yareeyaan baahida waxayna dhiirigeliyaan kaydinta.
Horaantii Isniintii, Erdogan wuxuu ku eedeeyay “dadka sare” inay ka macaashaan “dakhliga dulsaarka aan la kasban”, wuxuuna ku adkaystay ballanqaadkiisii ​​ahaa inuusan kor u qaadin kharashaadka amaahda.
Liiraha Turkiga ayaa 44 boqolkiiba qiimihiisu ku waayay doollarka sannadkii 2021, iyadoo khasaaruhu uu sii kordhayay dhammaadkii sannadkii hore, markaasoo Erdogan uu soo agaasimay qiimo dhimis xooggan oo dulsaar ah.
Doolarka ayaa kor u kacay heer sare oo taariikhi ah oo ku dhawaad ​​18.4 lira markii Erdogan uu ku dhawaaqay tallaabooyin taageero lacageed oo cusub bishii hore oo ay taageerayaan sida la sheegay faragelinta heerka dulsaarka dadban ee culus.
Qiimaha sarifka ayaa tan iyo markaas dib ugu soo laabtay ilaa 13 lira marka loo eego doolarka.
Hal dollar ayaa qiimihiisu ahaa 7.4 lira horaantii 2021.
Maamulka lacagta Turkiga ayaa qaaday tillaabo dheeri ah oo lagu taageerayo lacagta Liiraha iyadoo ku amartay ganacsatada wax dhoofisa inay ka iibiyaan bangiga dhexe rubuc ka mid ah lacagaha ay ka helaan lacagaha qalaad, si ay u taageeraan kaydkooda oo si degdeg ah hoos ugu dhacay.
Su’aalo ku saabsan xogta
Sicir-bararka bishiiba mar la akhriyo ayaa isku rogay arrin xasaasi ah oo siyaasadeed oo ka taagan dalka Turkiga, halkaas oo hoggaamiyeyaasha mucaaridku ku andacoonayaan in dawladdu ay cadaadis ku saarayso xafiiska tirakoobka si ay hoos ugu dhigaan qiimaha kor u kaca.
Waxay tilmaamayaan akhrinyo kala duwan oo ay diyaariyeen machadyo dhaqaale oo madax-bannaan sida Kooxda Cilmi-baarista Sicir-bararka (ENAG), oo ku qiyaastay sicir-bararka sannadkii ee bishii hore 82.8 boqolkiiba.
Aqrinta rasmiga ah waxay muujineysaa in qiimaha badeecadaha cunnada badankood ay si aad ah uga sarreeyaan heerka sicir-bararka sanadlaha ah.
Qiimaha caanaha, yogurt iyo saliida gabbaldayaha ayaa sare u kacay boqolkiiba 75 sanadkan gudihiisa, halka qiimaha digaaga uu kor u kacay 86 boqolkiiba.
Daraasad uu daabacay xafiiska Metropoll Isniintii ayaa muujisay in 90 boqolkiiba dadka ra’yiururinta – oo ay ku jiraan in ka badan afar meelood saddex meel taageerayaasha xisbiga talada haya – waxay sheegeen inay rumaysan yihiin sicir-bararka dhabta ah ee Turkiga ee sanadlaha ah ugu yaraan 50 boqolkiiba.
Horaantii isniinta, Erdogan waxa uu sheegay in uu bisha February booqan doono shirkadda tamarta hodanka ku ah ee Sucuudiga.
Tani waxay daba socotaa booqashadii uu Ankara ku tagay Dhaxal sugaha Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed bishii Nofembar, markaasoo lagu dhawaaqay maalgashi balaayiin doolar ah.
Safarka Erdogan ee Riyadh ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo markii uu xumaaday xiriirka labada dal kadib dilkii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi oo 2018 lagu dilay gudaha Qunsuliyadda Boqortooyada ee Istanbul.
Raadinta dhoofinta dheeraadka ah, Erdogan waxay u badan tahay inuu wax ka qabto cabashooyinka dhoofiyeyaasha Turkiga ee ku saabsan dib u dhaca ku yimid kastamka Sacuudiga iyagoo isku dayaya in ay xalliyaan arrinta ku habboon Ankara.
Qaar Ka Mid Ah Madaxda Maamul Goboleedyada Oo U Ololeynaya In Hal Magaalo Lagu Soo Kobo Doorashada